Dream League Soccer 2018 5.00 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
စတိုးမှ ဒေါင်းလုပ်များ 5M - 25M
ဗားရှင်း 5.00 လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က
ဂိမ်းများ အားကစား ဂိမ်းများ Dream League Soccer 2018
Dream League Soccer 2018 ၏ ဖော်ပြချက်
* This app uses Wi-fi or mobile data (if available) to download game content and advertising. You can disable mobile data usage on this game from within SettingsMobile Data.
LIKE US: facebook.comdreamleaguesoccer
FOLLOW US: twitter.comfirsttouchgames
WATCH US: youtube.comfirsttouchgames
Dream League Soccer 2018 အတွက် စတိုးအသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Dream League Soccer 2018 အပေါ် စတိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Dream League Soccer 2018 အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
apk-4-free စတိုး 323.89k 84.24M
Dream League Soccer 2018 နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
နောက်ထပ် အားကစား ဂိမ်းများ အက်ပ်များကို ကြည့်မည်
APK အကြောင်း Dream League Soccer 2018 အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 5.00
ထုတျလုပျသူ First Touch
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://s3.ftpub.net/privacypolicy.html
App Name: Dream League Soccer 2018
File Size: 372.95MB
Release date: 2017-11-16 16:13:01
လကျမှတျ SHA1: 27:36:D7:95:00:7B:2A:07:49:E2:23:2A:84:F2:50:5B:CC:64:49:BD
ထုတျလုပျသူ (CN): Andrew Stevens
အဖှဲ့အစညျး (O): First Touch Games Ltd
နယျမွေ (L): Oxford
Dream League Soccer 2018 APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ